Ndị gbara ọsọ ndụ 'dịkarịrị njọ' karịa mmachi: Warsaw, Budapest na Prague enweghị ọrụ iwu EU
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Czechia » Ndị gbara ọsọ ndụ 'dịkarịrị njọ' karịa mmachi: Warsaw, Budapest na Prague enweghị ọrụ iwu EU
Kọmịshọn European amalitela ịgba akwụkwọ megide mba atọ so na EU, na-ekwu na Poland, Hungary, na Czech Republic “emebeghị ihe dị mkpa” n’imeso ndị si mba ọzọ kwabata na ndị gbara ọsọ ndụ.
Ndị Brussels malitere usoro mmebi iwu na Tuesday.
A boro Warsaw, Budapest, na Prague na ha emezughi ọrụ ha dịịrị ha na ndị mbịambịa na ndị gbara ọsọ ndụ dịka atụmatụ 2015.
EUlọ ọrụ EU atọ ahụ “emebiela ọrụ iwu ha,” ka kọmịshọn a kwuru, na-agbakwụnye na ọ dọrọla mba ndị a aka na ntị ka ha debe “nkwa ha kwere na Gris, andtali na mba ndị ọzọ so na ya.”
Czech Republic, Hungary, na Poland “emebeghị ihe dị mkpa,” ka nkwupụta ahụ na-ekwu, na-azọrọ na ndị òtù EU atọ ahụ “echigharịbeghị otu onye.”
“Megide usoro a… kọmịshọn ahụ kpebiri ịmalite usoro ịda iwu megide ndị otu atọ a.”
Kemgbe Jenụwarị, mba ndị ọzọ nọ n’òtù a akwagala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 10,300 si andtali na Gris, ka kọmịshọn a si kwuo. Ọ gbakwụnyere, sị "ije ije mbugharị amụbaala nke ukwuu," na-ekwu na ọ hụla "mmụba okpukpu ise" ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga.
Na ngụkọta, e kesara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị gbara ọsọ ndụ 21,000 na Europe dum, ihe dị ka 14,000 si Gris na ndị ọzọ si Italytali.
Prime Minista Czech Bohuslav Sobotka katọrọ mkpebi Brussels ma kpọọ atụmatụ ya iji mesoo ndị na-akwaga mba ọzọ “adịghị arụ ọrụ,” ka Reuters na-akọ.
“Kọmịshọn European Union ji isi ike na-ekwusi ike na-aga n’ihu site n’inwe ihe ndọpụ ego nke na-ebelata ntụkwasị obi ụmụ amaala na ikike EU wee laa azụ ịrụ ọrụ na ụzọ esi eche echiche banyere nsogbu mpụga,” ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahụ kwuru Sobotka na nkwupụta email.
Warsaw arụghachikwara na mkpebi Brussels, na-ekwu na ọ na-ezube ịga n'ihu na amụma mbata ya ugbu a ma ọ chọghị ịnakwere oke ndị gbara ọsọ ndụ. Ọ dị njikere ịgbachitere ikike ya ịghara iweghara ndị gbara ọsọ ndụ n'ụlọ ikpe EU, osote Mịnịsta Ofesi Polish Konrad Szymanski gwara ndị Polish Press Agency (PAP) na Tuesday.
Mbido usoro ịda iwu ga-eme ka nkewa EU dịwanye elu, ma mee ka ndị otu a pụọ ​​na "nkwekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa" iji dozie nsogbu ndị si mba ọzọ na kọntinent ahụ, onye ọrụ Polish ahụ kwuru.
Ọ kpọkwara atụmatụ 2015 “nke ezighi ezi,” wee rụọ ụka na Warsaw na-atụnye ụtụ n’idozi nsogbu ndị ahụ kwagara mba ọzọ “site na itinye aka n’ichebe ókèala mpụga nke EU na iji usoro ya na-ewusi ike ọrụ enyemaka ya na mpaghara ahụ.”
Agbanyeghị, na nkwupụta ya na Tuesday, EU Commission hotara kọmishọna mbata na mbata ya, Dimitris Avramopoulos, dịka ọ na-ekwu, "Mgbe a bịara maka mbugharị, ka m kwuo hoo haa: mmejuputa mkpebi nke Council Council maka ịkwaga bụ ọrụ iwu, ọ bụghị nhọrọ . ”
"Rekwaga ebe ọzọ na-arụ ọrụ," ka Brussels kwuru.
Na Septemba 2015, ndị ozi EU bidoro atụmatụ ịkwaga ihe karịrị mmadụ 100,000 kwagara mba ọzọ na Europe niile. Agbanyeghị, ọ bụghị EU niile achọpụtala na usoro ndị a nabatara, na-ekwu na enweghị ike idozi nsogbu ndị si mba ọzọ site na oke iwu.
Czech Republic, Romania, Slovakia na Hungary na-emegide atụmatụ a kpam kpam. N'agbanyeghị ịdọ aka na ntị sitere na Brussels, Budapest kpebisiri ike ime ka amụma ya sie ike maka ndị na-achọ mgbaba ma na-aga n'ihu na atụmatụ nke oke nke ya.
Carbon monoxide na-emerụ ahụ dịkarịa ala 32 na New York City
Lufthansa na-agbasawanye netwọk ya ogologo oge na ebe ọhụụ si Munich na Frankfurt